Casemiro oo gashtay Kabihii Cristiano Ronaldo bal daawo gool cajiib ah oo uu caawa ka dhaliyey kooxda Atletico Madrid – Gool FM
(Madrid) 09 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul weyn oo 3-1 ka soo gaartay naadiga ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Casemiro ayaa goolka u daah rogay kooxda Real Madrid kulanka Madrid Derby, waxayna u muuqataa inuu Casemiro gashtay kabihii Cristiano Ronaldo.
Goolka uu xiddiga reer Brazil ee Casemiro ugu shubay kooxda Atletico Madrid ayaa ahaa gool labaaleey ama labo lugootis ah, waxaana uu ka faa’iideystay karoos la soo qaaday oo uu madax la seegay kabtan Ramos.
Waxaa Casemiro goolkan uu dhaliyey durba la la barbardhigay goolashii labaaleyda ahaa oo uu CR7 u dhalin jiray kooxda Los Blancos, taageerayaasha kooxda ka dhisan caasimadda Spain ayaana durba baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka beegsaday, iyagoo qaarkood oronaya Casemiro waxa uu gashtay kabihii Cristiano.
Kooxda Atletico Madrid ayaa soo barbareysay goolka Casemiro, waxaana ciyaarta gar isku mid ah ka dhigay Weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann.
Laakiin isla qeybtii hore ee ciyaarta waxaa gool rigoore ah u dhaliyey kooxda Real Madrid kabtankeeda Sergio Ramos, markii la isku soo laabtay qeybtii dambena Gareth Bale ayaa gool kale raacsaday Los Blancos ayaana 3-1 uga soo adkaatay Atletico oo ay booqatay.
Haddaba halkaan hoose ka daawo muuqaalka goolkii cajiibka ahaa ee uu caawa ka dhaliyey Casemiro kooxda Atletico Madrid:-
فيديو: “مقصية” كاسميرو تقص شريط أهداف ديربي مدريد https://t.co/Jk8eF4NGQQ https://t.co/7xYBAOfal8
— المغرب 24 للصحافة المغربية (@Maroc24presse) February 9, 2019